ငွေကြေး Pair ကိုဆက်စပ် - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်ငွေကြေး Pair ကိုဆက်စပ်မှု
ဒါဟာအချို့ငွေကြေးအခြားသူများကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ရွှေ့နေစဉ်တူညီတဲ့ဦးတည်ရွှေ့ဖို့လေ့ကသိရန်အသုံးဝင်သည်။ တဦးတည်းထက်ပိုမိုရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ငွေကြေးတစ်စုံ, ဒီအသိပညာ, အမြတ်အစွန်းရာထူးနှစ်ဆမှအန္တရာယ်များမျိုးစုံ၎င်း, ဘဏ္ဍာရေးကမ္ဘာ hedge.In ရန်, overexposure ရှောင်ရှားရန်, ဆက်စပ်မှုစွမ်းအပေါ်နည်းဗျူဟာကိုစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပြီးဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးအာမခံသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုအကြားဆက်ဆံရေး၏စာရင်းအင်းတိုင်းတာသည်။ အဆိုပါဆက်စပ်မှုကိန်းတခါတရံ 1 မှ -1 မှထုတ်ဖော်ပြောဆို, -100 မှ + 100 ဖို့နေကြပါတယ်။
+ 1 သို့မဟုတ် 100 ၏တစ်ဦးကဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးငွေကြေးအားလုံးအတူတူပင်ဦးတည်အချိန် 100% ရွှေ့မည်ကိုဆိုလိုသည်။
-1 သို့မဟုတ် -100 ၏တစ်ဦးကဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးငွေကြေးအားလုံးအချိန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ကို 100% အတွက်ရွှေ့မည်ကိုဆိုလိုသည်။
-100 နှင့် 100 အကြားမှာတော့ဆက်စပ်မှုကြားဆက်ဆံရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီသည်:
ထိုဆက်စပ်မှုမြင့်မား (70 အထက်) နှင့်အပြုသဘောပါလျှင်ထို့နောက်ငွေကြေးယှဉ်ဖောက်မရွှေ့ပါ။
အဆိုပါဆက်စပ်မှုမြင့်မားသော (70 အထက်) နှင့်အနုတ်လျှင်ထို့နောက်ငွေကြေးဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်ရွှေ့ပါ။
အဆိုပါဆက်စပ်မှု (60 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) အနိမ့်လျှင်ထို့နောက်ငွေကြေးတူညီသောလမ်းမရွှေ့ပါဘူး။
အဲဒီမှာကွဲပြားကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဘောင်ပေါ်စွမ်း (နှင့်ကာလ) အကြားငွေကြေးဆက်စပ်မှုကိုခြေရာခံလိုက်အဲဒီမှာအနည်းငယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်ကြပြီးတစ်ဖတ်ရန်လွယ်ကူ table ထဲမှာသူတို့ကိုတင်ပြ။
http://www.forexticket.us/en/tools/01-01-correlation displays4ဆက်စပ်မှုကျောက်ပြားကို (ကသီးခြားအချိန်ဘောင်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တစ်ခုချင်းစီ: နေ့စဉ်အလုပ်ချိန်နာရီ 5min, အပတ်စဉ်ထုတ်) 8 ကာလအထိစိတ်ကြိုက် 38 အားလုံးအတှကျ (200 စွမ်းမှရှေးခယျြ) ။ စားပွဲပေါ်မှာအတွင်းမည်သည့်ကလာပ်စည်းကျော် mouse ကို cursor ရွှေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းနှစ်ဦးအားလုံး၏သေးငယ်တဲ့ဆက်စပ်မှုဇယားထုတ်လုပ်သည်။
http://www.forexpros.com/forex-tools/correlation-calculato 29 တယောက်ပေါ်မှာရှိသမျှတပြိုင်နက်5အခြားစွမ်းဆန့်ကျင်ရှေးခယျြထားတစ်စုံနှိုင်းယှဉ်အမြင့်ဆုံးမှနိမ့်ဆုံးဆက်စပ်မှုကနေအားလုံးအဆင့်, အချိန် (နေ့စဉ်အလုပ်ချိန်နာရီ 5, 15, 30,5နာရီ,) ဘောင်များနှင့်6ကိုရှေးခယျြကာလ (10,25,50,100,200,300) ၏တစ်ရွေးထား၏။ သင်သုံးဇယားအလားတူကြည့်ရှုဘယ်လိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနှင့်မြင်နိုင်အောင်လည်း, ရှေးခယျြထားတနှစ်ခု correlating စုံတွဲဇယားဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောနေ့စဉ် 200 ကာလအဖြစ်ဘုံအချိန်ဘောင်နှင့်ကာလကိုဖြတ်ပြီးနှစ်ခုဝက်ဘ်ဆိုက်များ, နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်နှစ်ခုဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးအကြားဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြရန်ဘယ်လိုကွာခြားမှုမြင်ရပေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သြဂုတ် 24, 2012 အပေါ်ငါအဘို့အ Daily သတင်းစာ 200 ကာလဆက်စပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် EURUSD ForexTicket ဘို့ 29.9%, Forexpros မှ 47.7% ၏တာမြင့်မားဆက်စပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း, AUDUSD, ထိုသူနှစ်ယောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြားတစ်ဦးဒီကဗျာခြားနားချက်တခုရှိ၏။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူတို့က hard အဆုံးအသုံးပြုသူအများဆုံးတိကျမှုတစျခုဆုံးဖြတ်ရန်စေသည်တည်းဟူသော, နောက်ကွယ်မှကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်မှုဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုကြသည်။
www.forexticket.us 37min အပေါ်5သင်္ကေတမှတက်ဘို့ဆက်စပ်ပေးနာရီအလိုက်, Daily သတင်းစာ, အပတ်စဉ်အချိန် 200 မှကာလအရှည်တက်နှင့်အတူ scales ။ အောက်တွင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်မတ်လ 50,7အပေါ်ယူဘို့ 2013 ကာလသုံးပြီးဦးဆောင်အားလုံးဖြတ်ပြီးအလုပ်ချိန်နာရီနှင့်နေ့စဉ်ဆက်စပ်မှုတစ်ခုစခရင်ပုံဖြစ်ပါသည်:
အသနျဆုံးအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှု Pair ကိုတခုရဲ့ဥပမာဆိုတာဘာလဲ
EURUSD ပြီးတော့ GBPUSD ။
သူတို့ကအများအားဖြင့်အခါ, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာခေတ်ရေစီးကြောင်းတက်သို့မဟုတ်ဆင်းဆိုလိုတာက 80% သို့မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့အလွန်အားကောင်းတဲ့အပြုသဘောဆက်စပ်မှု, ပြ, ဒါကြောင့်လည်းသွေဖီကိုသာ၏ 80-90% ဖြစ်ပေါ်နှင့်တကွ, အချိန် GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 10-20% မ အချိန်။
မှတ်ချက်: စီးပွားရေး / ကနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များများစွာများအတွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုနှင့်ရုတ်တရက်သွေဖီဖို့ချွင်းချက်အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ ဥပမာ, မတ်လ 7, 2013 အပေါ်အထက်ပါဆက်စပ်မှုဇယားကိုကြည့်ပါကအီးယူနှင့် Gu အကြားဆက်စပ်မှု% 30 ဖို့အားနည်းပုံရသည်။
2009 ကတည်းက, နောက်ဆုံးသုံးနှစ်အတွင်းနှစ်ခုအားလုံးအတွက်အကြားလှုပ်ရှားမှုအတွင်းတူညီထုတ်စစ်ဆေး:
အကြားခိုင်ဆက်စပ်မှုများအတွက်အကြောင်းရင်းများ EURUSD နှင့် GBPUSD:
ငွေကိုအဖြစ်အလုပ်လုပ်သောငွေကြေး (ဒေါ်လာ) ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်: ငွေကြေးအားလုံးအတွက်ပထမဦးဆုံးငွေကြေးကုန်စည်သို့မဟုတ်ကိုးကားငွေကြေးစနစ်နှင့်ခြေရင်းသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအဖြစ်ဒုတိယအဖြစ်သိသည်ကိုသင် EURUSD ဝယ်ဖို့အခါ, သငျသညျ EUR ဝယ်ဖို့ပေးဆောင်။ ) ။
ငွေကိုငွေကြေးအဖြစ်ငွေကြေးရှယ်ယာဒေါ်လာနှစ်ဦးစလုံးသောကြောင့်, နှစ်ဦးစလုံးပြင်းထန်စွာအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ၏အစွမ်းသတ္တိနှင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်နေကြသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ဂဏန်းခန့်မှန်းချက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ထွက်လာကြသောအခါ, ဤဆိုလိုတာကအမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးအဘို့အနုတ် EURUSD (ဆီးအတားမရှိဒေါ်လာစျေး, ပိုမိုအားကောင်းယူရို) ထဒီတော့လွန်းလိမ့်မည်လိမ့်မည် GBPUSD (ဆီးအတားမရှိဒေါ်လာစျေး, ပိုမိုအားကောင်းပေါင်) ။
နှစ်ဦးစလုံးအားလုံး၏ကုန်စည်နှစ်ခုကြီးတွေဥရောပစီးပွားရေး, ယူရိုဇုန်နှင့်ဗြိတိန်, ပထဝီအနေအထားအရနှင့်စီးပွားရေးအရအချင်းချင်းချိတ်ဆက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ သူတို့ကရေကိုသာတစ်ဦးချွတ်ခြင်းဖြင့်ပျံ့ကျဲနေနှင့်ဖွင့်ချင်းစီကတခြားအရင်းနှီးဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ကြ၏။
စိတ်ဝင်စားစရာလုံလောက်, ကဲ့သို့တူညီသောဦးတည်ရွှေ့ကြောင်းအများအပြားစွမ်းရှိပါတယ် EURUSD နှင့် GBPUSD.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY နှင့် NZDJPY များသောအားဖြင့်အတူတူပင်ခြုံငုံဦးတည်ရွေ့ပါ။ သို့သော်, တူညီတဲ့ဦးတည်ရွေ့လျားနေချိန်တွင်သူတို့လုပ်အလွှဲခွင်နှင့်ပုံစံအတန်ငယ်ကွဲပြားစေနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်သုံး directional လှုပ်ရှားမှုတစ်မှန်မှန်မြင့်တက် (2006-2010) ရုတ်တရက်ပြိုလဲ (06 ၏ဒုတိယတစ်ဝက်) နှင့်အားကြီးသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး (08) ဖုံးအုပ်, 08-09 မှနားမှာရှိသမျှသောအထက်စွမ်းဘက်ခြမ်းသည်:
က4တစ်နှစ်ကာလအတွင်းအားလုံးသုံးတက်ဆင်းသွားလာလှုပ်ရှားမှုအပေါငျးတို့စွမ်းမတူညီတဲ့လွှဲခွင်နှင့်အတူဆိုသော်ငြား, တူညီတဲ့ဦးတည်ချက်ကိုမျှဝေကြောင်းသတိပြုပါ။ အဆိုပါ EURJPY အ GBPJPY 2006 ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်အခက်ခဲဆုံးလဲ 2008-2008 ကနေအမြင့်ဆုံးမြင့်တက်လျက်, AUDUSD နှင့် NZDUSD 2009 အတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူစေ၏။
အသနျဆုံးအပျက်သဘောဆက်စပ်မှု Pair ကိုဥပမာအနေနဲ့ဆိုတာဘာလဲ
EURUSD ထိုအ USDCHF ။
ဤရွေ့ကားအားလုံးမှန်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်ရွှေ့ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်ခုစွမ်းအတန်အသင့်အပတ်စဉ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်အပြန်အလှန်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေခဲ့ပါတယ်နေချိန်မှာသူတို့ကအရမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်ချိန်နာရီပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့ -96.9 အပေါ် -97.7 မှာအပြန်အလှန်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေခဲ့ပါတယ်ကြသည်။ ဒီအခါ, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာခေတ်ရေစီးကြောင်းတက်, ဆင်းပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF ခေတ်ရေစီးကြောင်းသောအခါတက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF ခေတ်ရေစီးကြောင်း, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာခေတ်ရေစီးကြောင်းဆင်းကိုဆိုလိုသည်။
အဖွင့်စဉ်ကာလအတွင်းနှစ်ဦးအားလုံးအကြားမှန်ဆက်ဆံရေးကို (06-08 ဆင်း (ဒုတိယထက်ဝက် 08), 09-10 အကြားတက် (2006-2011) ကာလအထဲက Check:
တဦးတည်းအခြားမြင့်တက်ကျရောက်သောအခါ, အခြားသားစဉ်မြေးဆက်ထသောအခါ, နှစ်ခုအားလုံးအတွက်အတွက်မှန်လှုပ်ရှားမှုသတိပြုပါ။
အကြားခိုင်အနုတ်ဆက်စပ်မှုများအတွက်အကြောင်းရင်းများ EURUSD နှင့် USDCHF:
ဒါကြောင့်များ၏ကိုးကားငွေကြေးနေစဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EURUSD ၏အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးဖြစ်ပါသည် USDCHF။ သူတို့ကသာလှန်တယ်, တစ်ဦးအမေရိကန်ဒေါ်လာအစိတ်အပိုင်းမျှဝေ။
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ဒါဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအထိတ်တလန်လည်းမရှိသည့်အခါ 2008 ၌ရှိ၏သကဲ့သို့, လူထုအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ၏ဘေးကင်းလုံခြုံဆိပ်အဆင့်အတန်းကိုကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန်သွားကြသည်ကစုံတွဲအတွက်ရပ်တည်နေရာတိုင်းမှာကအားကောင်းသွားသည်ကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါအားကောင်းဒေါ်လာစျေးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ EURUSD ဆင်း (အားနည်းနေယူရို, အားကြီးသောဒေါ်လာစျေး) ကမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီနေစဉ် USDCHF (အားကြီးသောဒေါ်လာစျေးအားနည်းယူရို) အထိ။
ဒေါ်လာစျေး Commons ၏အပြင်ဘက်တွင်ယူရိုငွေကြေးနှင့် ဆွစ်ဖရန့် အားကြီးသောပထဝီနှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးမျိုးမျှဝေပါ။ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အသီးအသီးကတခြားကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်ကြပြီးကစျေးနှုန်းကွာခြားမှုနှုန်းကနေသွေဖည်ဖို့မတဦးတည်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, ဆွစ်ဇာလန်ဗဟိုဘဏ် တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်လူသိများခဲ့ ဆွစ်ဖရန့် ယူရိုငွေကြေးမှဆွေမျိုးများလွန်းကိုခိုင်ခံ့စေတော်မူပြီ။ နောက်ဆုံးကြီးတွေဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည့်အခါခဲ့သည် ဆွစ်ဖရန့် ယူရိုငွေကြေးနှင့် 2010-2011 ၎င်း၏အချုပ်အခြာကြွေးမြီအကျပ်အတည်းမှဆွေမျိုးများလွန်းကိုခိုင်ခံ့စေကို၎င်း, ဆွစ်ဇာလန်ဗဟိုဘဏ် အခြေခံအားဖြင့်က EURCHF 1.1000 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလဲခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာလုံလောက်ခြင်း, USDCHF ကဲ့သို့တူညီသောဦးတည်ရွှေ့ကြောင်းအများအပြားစွမ်းပထမဦးဆုံးငွေကြေးကိုးကားအဖြစ်သူတို့အမေရိကန်ဒေါ်လာများအထူးသဖြင့်အခါ, ရှိပါတယ်။
USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, အားလုံးကွဲပြားခြားနားသော amplitude နှင့်အတူဆိုသော်ငြား, တူညီတဲ့ယေဘုယျဦးတည်ရွေ့ပါ။
အ 2006 အကျပ်အတည်းကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါသည်အထိဤသူအပေါင်းတို့စွမ်း 2008-2008 မှ lockstep အတွက်ရွှေ့ဘယ်လိုသတိထားကြည့်ပါ, ခွန်အား၌ထို့နောက်ဒေါ်လာစျေးပေါက်ကွဲပြီး, အင်အားသုံးမြိုးမြိုးဒီဂရီနှင့်အတူအထက်သို့အပေါငျးတို့အားလုံးပေးပို့ခြင်း။ USDCAD, USDSEK နှင့် USDNOK ရှိသမျှတို့, USDCHF သော်လည်း, 30% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမြင့်တက် USDDKK နှင့် USDSDG ဘဏ္ဍာရေးအကြပ်အတည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောအခါဤအအားလုံးအတွက်၏အခြေစိုက်စခန်းကိုးကားခြမ်းလောက်အားကောင်းဘဏ္ဍာရေးကနျြးမာရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ငါ့ကိုဦးဆောင်သောအဖြစ်တာထက်ဝက်သာမြင့်တက်။
သီအိုရီအပေါငျးတို့သအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်းရွှေ့သင့်သော USDJPY, ဆိုတဲ့အချက်ကို မှလွဲ. အားလုံးတို့သည် 2008 အထက်သို့လှုပ်ရှားမှုကနေအသိပေးစာပျက်ကွက်ကိုးကားခဲ့သည် ဂျပန် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်ကြောင့်ပြီးသား 1986-1991 (17 နှစ်ပေါင်းအစောပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက် 2008 အတွက်) တစ်ဦးထံမှပစ္စည်းပူဖောင်းမှတဆင့်ခံစားခဲ့ရပြီ, အရာများ၏ပြိုကျအနီးကပ်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမှကြာမြင့်ပြီထိုကဲ့သို့သောကြီးမားစက်မှုအင်အားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ရှည်လျားကိုထုတ်ပူဖောင်းငွေကြေးကျုံ့က 2008 နှင့်တကယ်တော့အတွက်ဘဏ္ဍာရေးမတည်ငြိမ်မှုပိုမိုကိုယ်ခံစွမ်းအားခဲ့ဆိုလို, USDJPY ဒါကြောင့် (တကယ်တော့သူကအကြီးဆုံးတယောက်ရှိပါတယ်) ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြွေးမြီကိစ္စများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်သော်လည်းထိုသို့ရှည်လျား၎င်း၏ကြွေးမြီဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး shouldered ကြောင့်မဟုတ်သောကွောငျ့, (အားကောင်းဒေါ်လာစျေး, အားနည်းယန်း) ယခုတိုင်အောင် 2008 မှအနိမ့်ကျဆင်း ဥရောပနှင့် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သူတို့ရဲ့ထော့နဲ့ကြွေးမြီပြဿနာတွေအတော်လေးမကြာသေးမီကသူတို့အပေါ်မှာထိုးနဲ့သူတို့ရဲ့လူမျိုးတို့နှင့်ပြည်နယ်များအချို့ကို buckle နှင့်ကျရှုံးနိုင်ကြောင်း သာ. ကြီးမြတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရှိ၏ခဲ့သည်။
1 ။ စာမေးပွဲမဟာဗျူဟာရန်
တစ်ဦးကိုစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးက ဗျူဟာ အားကောင်းဘို့ရှေ့ဆက်င်း၏နောက်ကျောနှင့်ရလဒ်များကိုဆက်စပ်အားလုံးဖြတ်ပြီးကော်ပီပွားယူနိုင်ပါတယ်စမ်းသပ်ပြီးလျှင်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏကျွန်တော်ထိုကဲ့သို့သော "စူပါအေး" ထ coding အဖြစ်တစ်ခုမဟာဗျူဟာတစ်ခုစိတ်ကူးနှင့်အတူတက်ကြ ညွှန်ပြချက် တစ်ဦးကို EA သို့, ဤ EA ၏အတွက်ချွေးများနှင့်အလုပ်ကြမ်းအတွက်ချပြီးပြီးနောက်ကျနော်တို့များသောအားဖြင့်တူသောအနိမ့်ပြန့်နှံ့ pair တစုံနှင့်အတူစတင်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ 2-3 နှစ်ပေါင်းအပေါ်အညွှန်းကိန်းရဲ့ parameters တွေကိုပိုကောင်းအောင်စတင် EURUSD။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ရန် EA 1500% ကိုချဆွဲထက်လျော့နည်းနှင့်အတူသစ်တော်သီးတစ်နှစ် 20 pips ထုတ်လုပ်, ဒီ pair တစုံအပေါ်ကောင်းတဲ့ပြန်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်သည်။ ဤအချက်မှာလူအများစုဟာ overexcited get နဲ့သူတို့ရဲ့အသစ်သည့်ဒင်္ကုန်သွယ်မှုယားယံမယ်လို့ EA။ ဒါပေမယ့်စောင့်ပါ။ အခုအသစ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့အလုအယက်အတွက်အချိန်နှင့် / သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းမပြုမီ EA တစ်သရုပ်ပြသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်ပေါ်ပါကကျွန်တော့်ကိုကိုယျ့ကိုယျကိုလှည့်ဖြားကြပြီမဟုတ်သေချာစေရန်တစ်ခုလုံးတွေအများကြီးစမတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်, optimization အတွက်ဖြစ်ပျက်သောအကြီးမားဆုံး Self-လှည့်စားဘို့ Over-optimization ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကွေး-သငျ့, အခြေခံအားဖြင့်ကွေး-သင့်လျော်သောအရာ သင့်ရဲ့ ဗျူဟာ စမ်းသပ်ခြင်းအောက်ရှိသမိုင်းဝင်ကာလဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ optimized parameters တွေကိုစျေးကွက်ပိုမိုစစ်မှန်တဲ့လျှင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖို့တလမ်းတည်းအတူတူ pair တစုံ၏ကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းဝင်ကာလနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးအတွက်၏တူညီသောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းဝင်ကာလပေါ်ဤအကြောင်း parameters တွေကို backtest ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလျှင်သင့်ရဲ့ကြောင်း EA အပေါ်စမ်းသပ်မှုနောက်ကျောကတိပေးလိုက်ပါတယ် EURUSD 2010-2012 ကနေနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်အဘို့, အဲဒီ backtest ဖို့ကြိုးစား EA 2008-2010 ၏နှစ်ပေါင်းအပေါ်နှင့်တူသောဆက်စပ်အားလုံးအပေါ် GBPUSD နှင့် AUDUSD နှင့် USDCHF အားလုံးလေးနှစ်ပေါ်မှာ။ သင့်ရဲ့အသစ်သည့်ဒင်္အချိန်ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းက EA ရိုးရှင်းစွာအပြင်ဘက်နှစ်နှင့်အားလုံးအပေါ်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်သင် optimized Over-ရှိစေခြင်းငှါဆိုတဲ့အချက်ကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ် EA သူတို့အားနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်တ pair တစုံရန်။ အခါသင့်သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်အမှန်တကယ်ယူရီကာယခုအချိန်တွင်ရစေခြင်းငှါ EA အကယ်စင်စစ်ကွဲပြားခြားနားသောသမိုင်းဝင်ကာလများနှင့်အားလုံးအပေါ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပါဘူး။ သောသင်ကြပါပြီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါသင့်ရဲ့ set ကိုသွားစေခြင်းငှါ EA ဒီမိုနဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အတူစစ်မှန်သောအကောင့်ပေါ်တက်။
2 ။ ကျော်-Exposure ရှောင်ကြဉ်ပါဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်နှစ်ဆ။
သင်လေးခုငွေကြေး (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF) အပေါ်ကောင်းစွာစမ်းသပ် back ကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ်မဟာဗျူဟာများရှာဖွေတွေ့ရှိသို့မဟုတ်ဖန်တီးခဲ့ကြသည့်အခါကြိမ်ရှိပေလိမ့်မည်။ သင်သည်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအားလုံးအပေါ်ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင့်, သင်ပိုမိုစုံလင်လာဖြစ်ကြကြောင်းစဉ်းစားအားလုံးအသစ်ရဲ့တှေ့ရှိမဟာဗျူဟာကုန်သွယ်မှုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ။ မဆိုပေးထားအချိန်တွင်2သြဇာ, ဒါပေမယ့်သင်ကပိုမိုစုံလင်လာနေကြသည်ထင်သောကွောငျ့, သငျသညျ 1 ခွင့်ပြုပါရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်: သင်2သုံးပြီးသင့်ကြောင်းသိကြ 1 သြဇာနှုန်း ဗျူဟာ လေးယောက်စလုံးအားလုံးအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်ကတည်းက, သင့်အနေအထား quadrupling ဆိုလိုတာကတစ်စုံ။ သငျသညျအသီးအသီး၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပါကဤသို့ပြုမှားဘယ်အရာကိုမျှမရှိပါတယ် ဗျူဟာ ကာစုစုပေါင်းဆင်းဆွဲကျန်ရစ်သူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၌တည်၏။ နှိမ့်ချစုစုပေါင်းမဲနှိုက်နှင့်အတူ, သင် max ကိုလေးခုအားလုံးအတွက်၏ဆင်းဆွဲထည့်ပါ။ သောကြောင့်အားလုံးလေးခုအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှု၏, သငျသညျအခြေခံအားဖြင့်အနာဂတ်ကာလ၌4တစ်အချက်အားဖြင့်သင့်သရေကျချခြီးမှမျးသနေကြသည်။ ငါသည်သင်တို့အတွက်ရင်ခက်အတွေ့အကြုံကနေသင်တို့ကိုပြောပြနိုင် လမ်းကြောင်းသစ် ကွဲပြားခြားနားသောအားလုံးအတွက်အပေါ်နည်းဗျူဟာအခြေစိုက်, သူတို့က (များသောအားဖြင့်တစ်ကြာရှည်ဘေးတိုက်စဉ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖျင်းချလူအပေါင်းတို့၏ bane မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်တစ်ချိန်တည်းသူတို့ရဲ့မဲနှိုက်ရပါလိမ့်မယ် လမ်းကြောင်းသစ် ဗျူဟာများ)။ သင်သည်သင်၏လေးမဲနှိုက် Down နှင့်အချို့သောနေ့၌သင်တို့အားတစ် 50% ကိုချဆွဲရင်ဆိုင်ဖို့လာအံ့သောငှါကိန်းဂဏန်းတက် add လျှင်, သင်ပိုကောင်း 50% အားဖြင့်တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်သင့်ရဲ့သြဇာကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်အခြားကုန်သွယ်မှုမှနှစ်ခုသာအားလုံးအတွက်ကောက်ခဲ့သည်။
3 ။ အန္တရာယ်ဟာကွဲပြားစုံလင်နေချိန်တွင်အမြတ်နှစ်ဆ
ဤသည်မှာအထက်ခွက်ကိုထက်ဝက်အချည်းနှီးသောအုပ်ချုပ်ရေးခွက်ကိုထက်ဝက်အပြည့်အဝခြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ယိငွေကြေးအားလုံးပေါ်တွင်သင်၏အမိန့်အားမရသဖြင့်နှစ်ဆအနေအထားအရွယ်အစားရှာဖွေနေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်ဤချင်မလဲ? ကောင်းပြီ, သော်လည်းသရေကျချနှစ်ဆနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းအမြတ်အစွန်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အန္တရာယ်ဘက်အတန်ငယ်အတူတူပင်ပေါ်နှစ်ဆနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအခြားငွေကြေးတစ်စုံသို့ရွေ့လျားခြင်းဖြင့်လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင့်လျှင် ဗျူဟာ နောက်ကျောအမြတ်အစွန်း / 1000 pips EURUSD အပေါ်ချဆွဲနှင့် 200 pips အမြတ်အစွန်း / 700 pips AUDUSD အပေါ်ချဆွဲ, သင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်တစ်နှစ်လျှင် 100 pips နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီး EURUSD နှင့် AUDUSD ထိုအမြတ်အစွန်းအလားအလာတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အတူတကွ (+ 70 ၏ဆက်စပ်မှု), တစ်နှစ်လျှင် 1700 pips, 300 pips တစ် drawdown ဆန့်ကျင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုအပေါ်ကိုတက်နှစ်ဆတိုးရန်ဖြစ်လျှင်, 400 pips ၏ဆငျးသကျတဲ့မဲနှိုက်ရှိခြင်းစဉ် EURUSD။ သင်စွန့်ထုတ်ဖြန့်မယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာအမြတ်အစွန်းအလားအလာတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မကြာခဏဆိုသလိုစွမ်းသည်သင်၏မှတ်တိုင်များမှာသင်ထွက်ရသို့မဟုတ်အယူမှားအရောင်းအသို့သင်တို့၏ဆွဲဆောင်ဟန်ကစျေးနှုန်းရုတ်တရက်ခုန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့နှစ်ဦးအားလုံးမဟုတ်ကတည်းကသို့သော် 100% ရုတ်တရက်ခုန်သင်ထွက်ရပ်တန်သို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးစွမ်းအပေါ်အယူမှားအရောင်းအသို့ဖြားယောင်းခြင်းခံခဲ့ရပြီးမည်မဟုတ်ပါဆိုလိုတာက, တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးစလုံးစွမ်းထိခိုက်မစေခြင်းငှါ, ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိနှီးနွယ်နေပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးမူဝါဒများထိုကဲ့သို့သောတအဖြစ်ဆက်စပ်မှုစွမ်း, အပေါ်သက်ရောက်မှုများအသီးသီးထားသောအခြားထက်လျော့နည်းထိခိုက်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းမတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ steadier ရွှေ့ပေလိမ့်မည်။
4 ။ စောင်ရန်းကို၎င်း, ဗုဒ္ဒခြံ
သူတို့သည် သိ. နေစဉ် EURUSD နှင့် USDCHF ပြောင်းပြန်ရွှေ့ရှိနောက်ဆုံးမှာသူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖျက်သိမ်းသောကြောင့်, တစ်ချိန်တည်းမှာနှစ်ဦးစလုံးရာထူးတိုတောင်းသွားမျှအချက်ဖြစ်ပါသည်, အဘို့အခါ, EURUSD ရေတံခွန်, USDCHF ဆန္ဒပြပွဲများ။ ဒါဟာသင်အကျိုးအလားအလာမရှိဘဲ, နှစ်ဦးစလုံးအရောင်းအပေါ်ပြန့်ပွားသို့မဟုတ်ကော်မရှင်ပေးဆောင်ဆိုတဲ့အချက်ကို မှလွဲ. , သင်နီးပါးမျှရာထူးခဲ့နီးပါးကဲ့သို့ဖြစ်၏။
တဦးတည်းနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျှင် EA EURUSD အပေါ် #1 နှင့် EA USDCHF အပေါ် #2, ကအတော်လေးဖြစ်နိုင်ချေဖြစ်ပါသည် EA #1 တိုဖြစ်လိမ့်မည် EURUSD သောတစ်ချိန်တည်းမှာ EA #2 တိုဖြစ်ပါသည် USDCHF။ နှစ်ခုကွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယုတ္တိဗေဒအရသိရသည်သရုပ်ဆောင်နေကြသည်နှင့်အမျှသူတို့မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအချင်းချင်းမိမိတို့၏ရာထူးသို့ဝငျသူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအမြတ်အစွန်း / အရှုံးဖွင့်သော့ခတ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ချေ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီ၏ entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်၏အချိန်ကိုက်လည်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည် EA နှစ်ဦးစလုံးအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူထွက်လာသောအလုံလောက်အောင်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့မဟုတ်တဦးတည်းဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူအခြားအမြတ်အစွန်းနှင့်အတူထွက်လာပါတယ်။ ငါသေသေချာချာပြန်နှစ်ဦးစလုံးကွက်ကိုစမ်းသပ်နှင့်အချင်းချင်းချီးမွမ်းရှိခဲ့သည်ထင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမှာလည်းတိုက်ဆိုင်မှုခြံပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ဘူး။
အပြည့်အဝခြံ Deviation အပေါ်တစ်ဦးကိုစေ့စေ့ဖြစ်နိုင်ခြေ (အန္တရာယ်များ!)
တချို့လူတွေကသူတို့ကဤအားလုံးအတွက်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ပ္ပံကျော်လွန်သွေဖည်မြင်ကြပြီလာသောအခါဆက်စပ်အားလုံးနှင့်အတူအပြည့်အဝခွံထဲမှာသော့ခတ်လို။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သိမြင်လျှင် GBPUSD တစ်ချိန်တည်းမှာနေစဉ်အတွင်းတစ် RSI သို့မဟုတ် Stochastics ၏ overbought ဇုန်ထဲသို့ဝင်လိုက်ပါတယ် EURUSD တစ်ဦး H4 သို့မဟုတ် D1 အချိန် frame ရဲ့ oversold ဇုန်အတွက်, တဦးတည်းအတိုသွားကြဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအဖြစ်ဤမွငျနိုငျဖြစ်ပါတယ် GBPUSD နှင့်အားလုံးသူတို့ရဲ့ပုံမှန်အကွာအဝေးမှပြန်ပြန်ပြောင်းလိမ့်မည်သူတို့လုပျတဲ့အခါသင်နောက်ဆုံးမှာဘယ်အကျိုးကိုရနိုငျသောမျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူရှည်လျား EURUSD ။ ဒီနေစဉ် ဗျူဟာ ပထမတစ်ချက်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ပါကအလွန်အန္တရာယ်များသည်။ အဲဒီနှစျခုအားလုံးအတွက်အတွင်းတည်ရှိနေရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြသဖြင့်, အချိန်များတွင်သူတို့သည်များစွာသောအင်အားစုနှင့်အတူပြောင်းပြန်ဝေးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေရွှေ့စေခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမစံအကွာအဝေးတကယ်ရှိပါသည်။ က downtrend သို့ ဝင်. ဖူးနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤ pair တစုံတစ်ဦး5တစ်နှစ်ဇယားသမိုင်းကိုတက်ဆွဲလျှင်, သင်ကထောကျရှည်လျားသောသို့မဟုတ်အတိုကောက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲသို့မဝင်ရနိုငျကွောငျးကိုမြင်ရမယ်လို့နေချိန်မှာသင်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ရှည်လျားသောအဆိုပါ EUR / GBP အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအရွေ့၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းဖြစ်အပြစ်ပေးခံရလိမ့်မယ်။
နောက်ကျောအစောပိုင်း 2000s ၌ငါ၏ရှည်လျားသောဘက်မှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောယိမဟာဗျူဟာများများစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည် EURUSD နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF ၏ရှည်လျားသောခြမ်း။ ငါဒေါ်လာစျေးခိုင်မာတဲ့ခဲ့ကြသည်လျှင်, ငါ့ရှည်လျားအမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF မဟာဗျူဟာခွန်အားဖမ်းပြီးမှကစားသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားလုပ်ကိုင်ဖို့ကဤနည်းဗျူဟာများထားခဲ့သည်, ထိုသို့အားနည်းခဲ့ကြသည်လျှင်, ငါ၏အရှည်လျား EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာကြောင့်အားနည်းချက်ဖမ်းပြီးမှကစားသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟု ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါပဲရှည်လျားတိုတိုပု EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အချိန်ကငါ့ကျောစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်ငါရှည်လျားသောခြမ်းကြောင်းနေသေးတယ်ခဲ့သည် USDCHF မဟာဗျူဟာရေတိုခြမ်းထက်အများကြီးပိုကောင်းဖျော်ဖြေ EURUSD ဗျူဟာများ။ ကြှနျတေျာ့ကိုပေါင်းစပ်သြဂုတ်လ 2008 မှီတိုင်အောင်အချိန်အထိများအတွက်ကောင်းစွာပြု၏အပေါငျးတို့သငွေကြေးဒေါ်လာ (ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ထိတ်လန့်ကာလ၌ဒေါ်လာစျေးအဖြစ်လုံခြုံဆိပ်) ဆန့်ကျင်လဲစတင်သောအခါ, ထို့နောက်ငါသည်ငါ့ခိုင်မာတဲ့ဒေါ်လာစျေးမဟာဗျူဟာများ (ရှည်လျားသော USDCHF) မဟုတ်ကြသဘောပေါက် ငါထင်ခဲ့သကဲ့သို့အညီအမျှငါ့အအားနည်းဒေါ်လာစျေး (ရှည်လျားသော EURUSD) နည်းဗျူဟာမှတွက်ချက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်ငါ့ရှည်လျားကြောင်းသတိပြုမိ EURUSD မဟာဗျူဟာများပင်မျိုးနွယ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စောင့်ရှောက်လျှင်, အနည်းငယ်ရှည်လျားရှိခဲ့သည် USDCHF သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု offset မှကစားသို့ဆောင်ခဲ့ခံခဲ့ကြသည်။ အမှန်အတိုင်းလက်ခံမှာတော့ကိုယ့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရပ်တန့်ပယ်ပိုကောင်းပါပြီမယ်လို့နှင့်စနစ်များကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဘက်တွင်အပေါ်သို့ကောက်ယူသောအခါကအပြည့်အဝချစီးကြမည်ဟုနိုင်အောင်, EURUSD အပေါ်ယိစနစ်များကို reverse ။